Horjoogayaal Al-shabaab kaga dhintay weerarkii Buula-mareer.
Home Somali News Horjoogayaal Al-shabaab kaga dhintay weerarkii Buula-mareer.
Waxaa Saacadba saacada ka danbeeysa isa soo taraya qasaaraha kadhashay weerarkii haben hore ay Ciidamada Faransiiska ku qaadeen degmada Buulamareer, iyadoo lasheegayo in Saraakiil farabadan oo isugu jira cadaan iyo Soomaali ay Al-shabaab ku waayeen dagaalkaas.
Goobta uu werarka kadhacay ayaa waxaa ku sugnaay Saraakiil sar saroo katirsan Al-shabaab kuwaasoo si aad ah u ilaalinayay lahayste Allex Dennis.
Gudoomiyaha G/shabeelada Hoose, C/qaadir Siidii oo wareeysi siinayay Raadiyaha kuhadla afka doowlada ayaa sheegay in Qasaarihii ugu badnaa uu kooxda ka soo gaaray weerarkaasi.
Mr Siidii ayaa tilmaamay in weerarkaasi ay ku geeriyoodeen Horjoogihii kooxda Al-Shabaab ee degmada Buulo Mareer ku xigeenkiisii dhinaca amniga.
Horjoogihii u qaabilsanaa degmada Qoryooleey ee isla gobolkaasi iyo horjoogihii degmada Baraawe ee Gobolka Sh/Hoose.
Weerarka Faransiiska habeen hore kusoo qaaday Buula-mareer ayaa waxaa dhimasho kasoo gaartay dadka deegaanka, Al-shabaab iyo Ciidamadii soo duulay, waxaana Faransiiska ay sheegeen ineey ku dileen dagaalka 17 ilaa 20 kamid ah Al-shabaab.